खेलकुद Archives • Page2of 78 • Nepal's Trusted Digital Newspaperखेलकुद Archives • Page2of 78 • Nepal's Trusted Digital Newspaper
भारोत्तोलनकी खेलाडी सन्जु चौधरी झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला
काठमाडौं । भारोत्तोलनकी खेलाडी सन्जु चौधरी बन्द कोठाभित्र झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेको पाइएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, ललितपुरका एसपी सिद्धिविक्रम शाहले सन्जु बिहान साढे ६ बजे कोठाभित्र झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको बताउनुभएकाे छ । प्रारम्भिक तथ्य हेर्दा चौधरीले आत्महत्या गरेको हुनसक्ने आशंका गरिएको एसपी शाहले बताउनुभयाे । हालसम्म घटनास्थलमा सुसाइड नोट भने भेटिएको […]
झापाका उमेश राईले १६ औं धर्मश्रीको खिताव जित्नुभएकाे छ । एनआरके फिटनेशका राईले झापाकै ग्यालेक्सी फिटनेशका ललित धिमाललाई पछि पार्दै उपाधी जित्नुभएकाे हाे । राईले नगद १० लाख, ट्रफी, मेडल, प्रमाण पत्र र अन्य उपहार प्राप्त गर्नुभएकाे छ । यस्तै धिमालले उपबिजेता भए बापत नगद ५ लाख हात पार्नुभयाे । तृतीय स्थानमा मसल्स एण्ड फिटनेश, […]
विभागिय टोली नेपाल पुलिस क्लबको अपराजित यात्रा जारी रहेको छ । छैटौं आर.बि.बि – एन.भि.ए. राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल क्लब लिग २०७९ मा बिहिबार पनि महिला तर्फ पुलिसले जित निकाल्दै अपराजित यात्रालाई कायमै राखेको हो । पुलिसले प्रतिभा माली बेगर खेलेको न्यू डायमण्डलाई २५–११, २५–१७, २५–१५ ले पराजित गरेको हो । पुलिसले आफुले खेलेको […]
दुई विभागिय टोली नेपाल पुलिस क्लबको महिला तथा पुरुष दुवै टोलीलाई छैटौं आर.बि.बि. , एन.भि.ए. राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल क्लब लिग २०७९ मा बुधबार सफलता प्राप्त भएको छ । महिला तर्फ पुलिसले बुटवलको एभरेष्ट भलिबल क्लबलाई २५–१८, २५–१९, २५–१४ ले तथा पुरुष तर्फ गण्डकी प्रदेश भलिबल क्लबलाई २५–२३, २५–१६, ३२–३० ले पराजित गर्दै सफलता […]
जिम्बावेविरुद्ध जितका लागि नेपाललाई १ सय ३७ रनको लक्ष्य
काठमाडौं । जिम्बावेविरुद्ध तेस्रो टी-२० खेलिरहको नेपालले जितका लागि १ सय ३७ रनको लक्ष्य पाएको छ। टस हारेर ब्याटिङ्को निम्तो पाएको जिम्बावेले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै १ सय ३६ रन जोडन सक्यो। जिम्बावेलाई १सय ३६ रनमा रोक्नका लागि कप्तान सन्दिप लामिछानेले २ विकेट, सोमपाल कामी र बशिर अहमदले समान १/१ विकेट लिनुभयाे। यस्तै जिम्बावेसँगको […]
पोखरा । पोखरामा हुने नवौं संस्करणको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका सभ्य र भव्यरुपमा सञ्चालन गर्न गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विशेष चासो दिनुभएकाे छ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा जेठ २२ देखि २८ गतेसम्म प्रतियोगिता हुँदैछ । प्रतियोगिताको तयारी र यसको व्यवस्थापनका लागि गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मंगलबार उच्चस्तरीय बैठक बोलाउनुभयाे । प्रतियोगितालाई व्यवस्थापन गर्न […]
नेपाल ब्यायाम मन्दिरले आयोजना गर्ने १६ औं धर्मश्रीलाई काठमान्डाैँ महानगरको साथ
खेलकुद क्षेत्रमा नेपालकै सवै भन्दा पुरानो संस्था नेपाल ब्यायाम मन्दिरले आयोजना गर्ने १६ औं धर्मश्रीका लागि काठमान्डाैँ महानगरपालिकाको मुख्य प्रायोजन रहने भएको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा आयोजक नेपाल ब्यायाम मन्दिरले काठमान्डाैँ महानगरपालिकाले धर्मश्रीको लागि मुख्य प्रायोजन गर्ने जानकारी गराएको हो । यस्तै अन्य विभिन्न संघ संस्थाले पनि प्रायोजन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएकाे हाे […]
जिम्बावे ‘ए’विरुद्ध नेपाल टस जितेर फिल्डिङ गर्दै,जिम्बावेलाई ब्याटिङकाे निम्ताे
काठमाडौं । जिम्बावे ए विरुद्धकाे दाेस्रो टी-२० क्रिकेटमा नेपालले पहिले फिल्डिङ गर्ने भएकाे छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा नेपालले टस जितेर फिल्डिङ राेज्दै जिम्बावेलाई ब्याटिङकाे निम्ताे दिएकाे हाे । नेपाली टिममा एक परपवर्तन गरिएकाे छ । आरिफ शेखकाे स्थानमा भीम सार्की पहिलाे एघारमा खेल्दै हुनुहुन्छ । पहिलाे टी-२० खेलमा नेपाल जिम्बावे ए टीमसँग ६ […]
गण्डकी प्रदेश भलिबल क्लब र नेपाल पुलिस क्लब छैटौं आर .बि.बि.– एन.भि.ए. राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल क्लब लिग २०७९ मा पुरुष तर्फ विजयी सुरुवात गर्न सफल भएकाे छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्डहलमा संचालन भएको पहिलो खेलमा गण्डकीले ३ – १ को जित निकाल्यो । गण्डकीले ढोरपाटन स्पोर्टस् क्लब माथि २५–१६, २३–२५, २५–१९, […]
जिम्बावे ‘ए’ विरुद्ध नेपालले ब्याटिङ गर्ने
काठमाडौं । जिम्बावेविरुद्ध टस हारेर नेपालले ब्याटिङ्‌को निम्तो पाएको छ। पहिलो टी-ट्वान्टी अन्तर्गत जिम्बावे ‘ए’ विरुद्ध नेपालले ब्याटिङ गर्ने भएको हो। जिम्बावे ‘ए’ बीचको खेल अहिले टियु क्रिकेट मैदानमा भइरहेको छ। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग टु अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिजको तयारीमा स्वरूप नेपालले जिम्बावे ‘ए’ सँग सिरिज खेल्न लागेको हो।